Siday ku dhacday in jiil dhan ay qabatiimaan isticmaalka sharoobada qufaca? - BBC News Somali
Image caption Isticmaalka sharoobada qufaca waxay saamaysay bulsho walba oo dadka reer Nigeria ah
Baaritaankeeda ayaa ku ogaatay jiritaanka koox dambiilayaal qarsoon oo baabi'inaya nolosha da' yarta Galbeedka Africa.
''Waxaa jira caruur iskuulaadka dhigta oo marka la dhadhansiiya sharoobadan dalbanaya in loo kordhiyo '' waxaa sidaa yiri Junaid Hassan.
Image caption Dadka la qabsaday isticmaalka sharoobada qufaca ayaa la katiinadeeyaa si aysan u hellin asxaabta kale ee sharoobada isticmaala
Sida dawooyinka kale ayay sharoobadan Codeine-ka loo yaqaano waxay bi'isaa qufaca. Balse waxay keentaa mirqaan ama istiin uu qofku helayo. waxay sidoo kale sharoobadan oo aad loo qaato keentaa saamayn maskaxda iyo jirkaba ku yimaada.
''Weli waxaa jirkiisa ka sii baxaya sharoobadii maandooriska '' sidaas waxaa yiri Sani Usaini oo madax ka ah xarunta dhaqan-celinta
''Sariirta ma joogi karro wuuna jabiyay sariirta, waxuu sidoo kale jabiyay daaqadaha isagana wuu is dhaawacay'' Mr Usaini ayaa sidaas u sheegay gabadha weriyaha ah oo hortaagan qof kaloo katiinadaysan.
Image caption Shirikada Emzor ayaa sheegtay inay baaritaan samaynayso
''Marka qofku uu dawadam qabatimo uuna qofku u baahan yahay waxaasi uu la qabsaday, qiimaha shaygaasi dhib kuma ahan'' ayuu yiri, waxuuna sii raaciyay '' Waa ganacsi aan ogahay xitaa haddii aan hayo hal milyam oo kaartoon aan ku gadi karro hal isbuuc gudihiis.''
'Waxay gaartay meel walba'
Image caption Ciidanka ka hortaga daroogada oo weriyaha BBC-da tusaya hub laga soo qabtay kooxaha daroogada.
''Xitaa maanan hellin boqolkiiba tobon dawada suuqa ku jirta'' waxaa sidaas yiri HamzaUmar taliyaha ciidanka ka hortaga Maandooriya ee gobolka Kano.
Fariintan fudud ayay u diraysaa dhalinyarada reer Nigeria ee damacsan isticmaalka dawadan; ''Waxaan kula talin lahaa inay isticmaalin dawadan hadiiba aysan hadda billaabin.Iisticmaalka dawadan waxay burburinaysaa noloshooda''